Nitana sy nandroaka ilay mpitarika mpiaro ny zon’olombelona Ogandey hiverina any Oganda ny manampahefana Tanzaniana · Global Voices teny Malagasy
Nitana sy nandroaka ilay mpitarika mpiaro ny zon'olombelona Ogandey hiverina any Oganda ny manampahefana Tanzaniana
Voadika ny 04 Mey 2019 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Swahili, Português, Yorùbá, English
Dr. Wairagala Wakabi [Sary avy amin'ny CIPESA ary nahazoana alalana]
Notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Julius Nyerere tao Dar es Salaam, Tanzania ny 25 aprily i Wairagala Wakabi, mpitarika mpiaro ny zon'olombelona nomerika avy ao Oganda.
Nasaina hiteny amin'ny Andro Fankalazana Isan-taona ho an'ny Mpiaro ny Zon'olombelona ao Tanzania i Wakabi izay nampiantranoin'ny Fiaraha-mitantan'ny Mpiaro ny Zon'olombelona ao Tanzania (THRDC). Wakabi no Tale Mpanatanteraka ny Fiaraha-miasa amin'ny politikan'ny TIC iraisam-pirenena ho an'ny Afrika Atsimo sy Atsinanana (CIPESA), iray amin'ireo fikambanana lehibe miasa amin'ny politikan'ny Aterineto sy ny fahalalahana miteny an-tserasera aty Afrika.
Nalefa niverina tany Oganda i Wakabi rehefa avy nohadihadiana nandritra ny ora maromaro, ary tsy navela naka mpisolovava izy nandritra izany.
Nanandrana ny hiaro azy ny mpisolovava avy ao amin'ny Fiaraha-mitantan'ny Mpiaro ny Zon'olombelona ao Tanzania, saingy nolazaina fa noroahana fotsiny i Wakabi noho ny “tombontsoam-pirenena “:
VAOVAO FARANY: Nalefa niverina tany Oganda tamin'ity hariva ity i Dr. Wakabi taorian'ny ora maro namotopotorana azy. Na izany aza, tsy afaka namaritra ny fototry ny fihazonana azy sy ny fandroahana azy ireo mpisolovava. Nitatitra ry zareo fa tsy navelan'ny manampahefana niditra tao Tanzania izy noho ny “tombontsoam-pirenena “
Na dia ora vitsy monja aza ny faharetan'ity fanadihadiana ity, dia niteraka resabe teo amin'ireo mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona tao amin'ny faritra izany ​​izay lasa niahiahy be momba ny fitondran'i Tanzania ireo mpikatroka sy mpanao gazety. Ny volana Novambra tamin'ny herintaona, notanana nandritra ny ora maromaro tao Dar es Salaam, Tanzania i Angela Quintal sy Muthoki Mumo, izay samy anisan'ny Komity Mpiaro ny Mpanao gazety ary nogiazana vonjimaika ny pasipaoron'izy ireo.
Moa ve i Tanzania minia manao ezaka mba hampanginana ireo mpiaro ny zon'olombelona amin'ny alàlan'ny fampijaliana azy ireo mba handresen-dahatra azy ireo tsy hiditra ao amin'ny firenena? Tamin'ny faramparan'ny taon-dasa dia i Angela Quintal sy Muthoki Mumo avy ao amin'ny fahalalahana an-gazety no niharan'izany fa tsy i Dr Wakabi? Tsy afaka mampangina anay izany!
Nanambara ny Human Rights Watch fa nahitana “fisongadinana fijotsoana tamin'ny fanajana ny fahalalahana miteny, mikambana ary mivory” i Tanzania teo ambany fitondran'ny filoha John Magufuli.
Tamin'ny taona 2015, namoaka ny Lalàna momba ny Heloka An-tserasera ny Repoblika Tafarain'i Tanzania. Tao anatin'ny taona iray nahalany io lalàna io, farafahakeliny Tanzaniana miisa 14 no nosamborina sy noenjehina araka ilay lalàna noho ny faniratsirana ny filoha tao amin'ny tambajotra sosialy. Nahitana ny famoahana ny Fitsipika mifehy ny Serasera Elektronika sy ny Fifandraisandavitra (Votoaty Antserasera) ny volana Martsa 2018, ka nahatonga izany hanery ireo bilaogera hisoratra anarana sy handoa vola mitentina 900 dolara Amerikana isan-taona ho famoahan-dahatsoratra an-tserasera. Nahatonga ireo bilaogy mahaleotena maro ho nikatona izany .
Niteraka ny rivo-piainana amin'ny fampitahorana, ny fanasivanan-tena ary ny tahotra haneho hevitra hafa momba ny mpitondra firenena ny fangejana ny fampitam-baovao tsy miankina amin'ny alàlan'ny sazy isankarazany izay nihatra tamin'ny sehatra fampahalalam-baovao sy ny fandrahonana ara-pitsarana izay natao tamin'ny mpanao gazety.
Toa hita fa tohin'ny fandrahonan'ny governemanta an'i Tanzania amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny mpanohitra ny fitazonana sy ny fandroahana an'i Wakabi hiverina tany Ogandà.